Waayeellada - princetoncovid.org
Wadashaqeynta Bulshada ee maktabada Dadweynaha ee Princeton, Dowlada hoose ee Princeton iyo iskuulada dadweynaha ee Princeton. Macluumaadka la xaqiijiyay. Ilaha la aaminay
Cusboonaysiinta Duqa Magaalada
Wadada dib loo furo
Xeerarka Hadda & Talooyinka
Liiska Waxa Furan
Waa Maxay Soo-gudbinta Furan
Taageerida Ganacsiga Degmada
Guriga Aad Joogtid
Ka shaqeynta Kheyraadka Guriga
Ka baxsan xirmooyinka
Dhacdooyinka Virtual gudbinta
Adeegyada Caqiidada ku Saleysan ee Rumaysiga ah
Ganacsiga & Shaqada
Xarunta Kheyraadka Sare ee Princeton
Online kooxaha taageerada
Nabadgelyada waayeellada - Barnaamijku wuxuu isku xiraa waayeelka cunno aan lala xiriirin.
Virtual Asxaabta Guriga barnaamijka - Shaqaalaha PSRC waxay ka hubiyaan waayeelka Princeton taleefan ama websaydh.
Barnaamijka Buddy Initiative - Volunteers waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan dadka da'da ah ee Princeton. Macluumaad dheeri ah halkan. Si laguugu weheliyo Buddh Deris oo kaa caawin doona, fadlan is-qor halkan.
Wadahadalka Virtual Fireside - Ku soo dhowaada kulamada maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 2 galabnimo Is-deji si aad ula sheekaysato asxaabtaada cusub kombiyuutarka, taleefanka gacanta ama taleefanka dhulka. Diiwaangelinta halkan.
Adeegga Qoyska iyo Caruurta ee Yuhuudda ee Xarunta Weyn ee Meerkuriga
Telefoon “saacadaha-tagida,” M, W, F, 609-987-8100, ext 0; kooxaha taageerada tooska ah ee samaynta, 609-987-8100, ext. 117 ama email; la-talin shaqsiyeed, aqbalidda medicaid, daaweyn, shaqsiyaad aan caymis ku jirin iyo caymiska gaarka loo leeyahay (lacag-bixinnada ayaa laga tanaasulay xilligii qalalaasaha), 609-987-8100, dheere 102. Saacadda-saacadaha, Kooxda Taageerada iyo Adeegyada Shaqsiyaadka ayaa lagu heli karaa Isbaanish oo leh la-taliyayaal laba luqadood leh.
Dhakhaatiir / dhakhaatiir howlgab ah oo ka yimid wadamada kale ayaa u baahnaa
Guddoomiyaha ayaa soo saaray amar fulin ah oo u oggolaanaya dhakhaatiirta howlgab ka ah ama ka yimid waddamo kale inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah COVID-19. Amarku wuxuu siinayaa difaac iyaga oo ah mas'uuliyadda madaniga ah ee dadaallada aaminka ah ee bixinta daryeelka COVID-19. Shakhsiyaadka way is qori karaan halkan. Kama daboolna amarku, laakiin sidoo kale waa loo baahan yahay ardaydu sanadkii ugu dambeysay ee daraasadaha caafimaadka.
Xidho Mashruuc Masas badan
Golaha Farshaxanka ee Princeton wuxuu kafaala qaadaa mashruuc xubnaha bulshada ah ay ku heli karaan gacan ku kordhinta bixinta maaskaro gudaha ah. Waxaad ku tabaruci kartaa goynta dharka, iyo / ama tolo. Maaskalada oo dhammaystiran ayaa markaa loo heli doonaa soo qaaditaan loogu talagalay kuwa u baahan. Macluumaad dheeraad ah